Htc Legend နှင့် Htc Desire တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည် Androidsis
antocara | | HTC က, UHI
ဒီအသစ်န်းကျင်ဖန်တီးခဲ့သည် HTC Senseအဆိုပါ HTC Legend ကျစ်လျစ်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ကြည့်ဖြည့်စွက်ရန်, အ HTC Legend တစ် ဦး အထင်ကြီးမျက်နှာပြင်ထည့်သွင်း ၃.၂ လက်မ AMOLED HVGA။ ရိုးရာရှေးတံတိုင်းကိုလဲ Optus တံဆိပ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုမပျက်စီးစေဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ခလုတ်ငယ်လေးတစ်ခုဖြင့်ဝိုင်းထားသည်။
ကို HTC Desire
El ကို HTC Desire သတင်းများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အကြိုက်ဆုံးနေရာများနှင့်အသုံးပြုသူအတွက်အရေးကြီးသောအခြားအကြောင်းအရာများကိုအမြင်အာရုံခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ ဖုန်းအတွက်အဆင့်မြင့်ဆုံးဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြင့် ကို HTC Desire အရမ်းကောင်းတယ် ၃.၇ လက်မ AMOLED WVGA မျက်နှာပြင် ပါဝင်မှုများကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းတို့အတွက်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြစ်ဖြစ်ဝက်ဘ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုကြည့်ရှုခြင်း။ ၎င်းတွင် 1 gigahertz Snapdragon ပရိုဆက်ဆာနှင့်Adobe®Flash® 10.1 တပ်ဆင်ထားသည်။ သူ့ကိုကဲ့သို့တူညီသော HTC Legend၊ HTC Desire ၎င်းတွင် optical pointer လည်းပါ ၀ င်သည်။
Vodafone မှ Terminals Group ၏အကြီးအကဲပက်ထရစ်ချွမ်က“ HTC သည် Vodafone အတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောမိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးစားသုံးသူစျေးကွက်တွင်စမတ်ဖုန်း ၀ ယ်လိုအားတိုးတက်လာရန်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားစမတ်ဖုန်းနှင့်အပြည့်အဝနှင့်အပြည့်စုံဆုံးရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည် HTC Legend၊ HTC Desire နှင့် HTC HD mini သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ဖြင့်အဓိကစျေးကွက်များတွင်ပါလိမ့်မည်။ Vodafone ဖောက်သည်များသည် HTC နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းမှုကြောင့်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများရရှိခြင်းကိုအထူးကျေနပ်မိသည် HTC Legend ငါတို့အတွက် Vodafone 360 ​​အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုအထုပ်နဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်။ "
အသစ်က HTC Legend Vodafone နှင့်ဥရောပ၌၎င်းနှင့်လာမည့်Aprilပြီလအစတွင်အခမဲ့စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သည်။ အာရှအပါအ ၀ င်အခြားကမ္ဘာ့ဒေသများတွင်၎င်းကိုယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းရရှိနိုင်သည်။ The ကို HTC Desire ဒီဒုတိယသုံးလပတ်ရဲ့အစမှာသူဟာအဓိကဥရောပနဲ့အာရှစျေးကွက်တွေကိုထိုးဖောက်လိမ့်မယ်။ သြစတြေးလျတွင်, ကို HTC Desire Telstra နှင့်အတူသီးသန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံသစ် HTC Sense HTC နှင့်ဥရောပနှင့်အာရှတို့တွင်အခမဲ့ update အဖြစ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
HTC Sense ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်မှုလည်ပတ်ရာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားနေရာချထားခြင်းအားဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုရိုးရှင်းစေပြီးရိုးရှင်းစေသည်။ ဒီအတွေ့အကြုံကလူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ပြီးဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံမူသုံးခုကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဤရွေ့ကားအလယ်ပိုင်းပုဆိန် "အဲဒါငါ့ဥစ္စာပါ","အနီးရှိ"ထိုအခါ"မျှော်လင့်မထားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဒီအတွေ့အကြုံအသစ်အတွက်အဓိကကျနေဆဲဖြစ်သည် HTC Sense.
သင်၏ HTC Sense အသစ်သည်သင်၏ဘဝတွင်အရေးကြီးဆုံးသူများနှင့်အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အာရုံစူးစိုက်နေသည်။ ၎င်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်နှင့် HTC ခေါ်ဝစ်ဂျက်အသစ်တို့ဖြင့်စတင်သည် HTC Friend Stream ၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာနှင့် Flickr အပါအ ၀ င်လူမှုရေးဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုစနစ်တကျမွမ်းမံထားသောအစီအစဉ်များနှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤရိုးရှင်းသောစုစည်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများလုပ်သောအရာများနှင့်သူတို့မျှဝေထားသောပုံများနှင့်လင့်ခ်များသို့ဝင်ရောက်ရန်တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူစေသည်။ Friend Stream အပြင်အဆက်အသွယ်များကိုသူငယ်ချင်းအုပ်စုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းများ၌ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
HTC Sense အတွေ့အကြုံအသစ်သည်ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၊ အီးမေးလ်အကောင့်များနှင့်အခြားအရာများအပါအဝင် application များကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင် HTC Sense ၏ဗားရှင်းသစ်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်နှင့်သတင်းစာဖတ်သူ၏ဝစ်ဂျက်နှင့်၎င်းတို့ကိုလျှင်မြန်လွယ်ကူစွာအလွယ်တကူရယူနိုင်ရန်မျက်နှာပြင်ခုနစ်ခုရှိသောအထွေထွေဘောင်ကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Htc Legend နှင့် Htc Desire တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Vodafone သည် HTC Desire အသစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ !!!!!
Vodafone က HTC Desire ကိုရောင်းလိုက်တာကကျွန်တော့်ကိုကြောက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Nexus One ကိုဂူဂဲလ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပဲရောင်းလို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့ကျကျ HTC Desire ဟာ Nexus One ရဲ့ HTC ဗားရှင်းဖြစ်လို့ Vodafone ကိုကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ သင် "Google နှင့်" သို့မဟုတ် "HTC Sense" xD လိုချင်လားလားမေးလားလားမေးလား
Nexus ကို T-Mobile နှင့်အတူ USA တွင်ရှိသကဲ့သို့ Google ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သာရောင်းချလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခုက Vodafone (ထောက်ပံ့ထားတဲ့) နဲ့ဆက်စပ်ဝယ်လို့ရတယ်။
Vodafone or Orange ကစာချုပ်အသစ်နှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုဖြင့် Desire ကိုငါးစာအဖြစ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်လား။ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီနှင့်မိုဘိုင်းလ်ပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။
[Mod] Motorola မှတ်တိုင်၌ Android 2.0.1 မှ 2.1 ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ